स्वस्थ शरीर हुन रगत सफा हुनुपर्दछ, कसरी सफा गर्ने त रगत ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
मानिसहरु शरीर स्वस्थ राख्न कति सम्म गर्दैनन् तर पनि उनीहरु बिरामी हुन्छन । मिर्गौलाको कार्यबोझ घटाउन हामीले पनि खानपिनमा होस पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । शरीरबाट विषालु तत्व सहज रूपमा बाहिर निकाल्न मिर्गौलालाई सहयोग गर्ने केही खाद्य वस्तु निम्न छन् ः
लसुन – बढी मात्रामा सल्फर हुने लसुनलाई शरीरको सफाइ गर्ने प्रकृतिको एक उत्तम वस्तु मानिएको छ । कलेजोमा विषालु तत्व विघटन गर्ने विशेष खालको एन्जाइम उत्पादनमा सघाएर लसुनले शरीरबाट ती वस्तु बाहिर निकाल्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
चुकन्दर – गान्टे मूल जस्तो गाढा रातो रङको चुकुन्दरमा एन्टिअक्सिडेन्ट ठूलो परिणाममा हुन्छ । एन्टिअक्सिडेन्टले घातक फ्रिरेडिकललाई निस्तेज पारेर शरीरको रक्षा गर्दछ । कलेजोलाई सजिलो पारेर रगतको सफाइमा समेत चुकुन्दरले मद्दत पु¥याउँछ ।
आलस – मुटुलाई अत्यन्त आवश्यक ओमेगा–३ फ्याटी एसिडको साह्रै राम्रो स्रोत आलसले रगत स्वस्थ राख्न मद्दत पु¥याउँछ । फाइबर समेत धेरै हुने भएकाले विषालु तत्व शरीरबाट बाहिर निकाल्न आलस उपयोगी हुन्छ । यसअतिरिक्त हरियो सागपात, ब्रोकाउलीले पनि शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छन् ।
लसुन स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । यसले प्राकृतिक रुपमा रगतलाई सफा गरी रगतमा भएका विकारलाई फाल्न मद्दत गर्छ । त्यसैगरी यसले पेटको समस्या, रुघाखोकी, घाँटीको समस्या, श्वासप्रश्वासको समस्याबाट आराम दिन्छ । यसले अनुहार तथा छालाका समस्याबाट पनि छुटकारा दिन्छ । यसमा साइटोकेमिकल्स हुन्छ जुन फोक्सो सफा गर्न पनि लाभदायक छ । त्यसगरी यसले रगतमा भएको बोसो पगाल्नुका साथै रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्न समेत मद्दत गर्छ । विहान खाली पेटमा करिब तीन पोटी लसुन मन तातो पानीसित खाने गर्नाले रगत सफा हुनुका साथै एसिडिटीबाट छुट्कारा पाउनु मद्दत मिल्छ ।
कागतीमा सिट्रिक एसिड पाइनुका साथै अल्कालिनको तत्व पाइन्छ । यसले तपाईको शरीरमा भएको विकारलाई हटाउन मद्दत गर्छ । यो तपाईको पाचन शक्ति बढाउन पनि लाभदायक छ । तीन चम्चा कागतीलाई मनतातो पानीमा हाल्ने । त्यसमा केही मह मिसाएर खाली पेटमा सेवन गर्नाले शरीरमा भएका बिकार पदार्थ नष्ट गर्न मद्दत गर्छ ।
कलेरालाई शरीरमा भएको रगत सफा गर्न उपयुक्त तरकारीको रुपमा लिइन्छ । यसले क्यान्सर, पायल्स जस्ता रोग सित लड्न सहयोग गर्छ । त्यसैगरी सुगर कम गर्न, रगतमा वोसोको मात्रा कम गर्न, छाला सफा गर्न पनि मद्दत गर्छ । यसले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई पनि मजबुत बनाउछ ।
अमलाले रगत सफा गर्नुका साथै हाम्रो पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउछ । यसले फोक्सो तथा आन्द्रालाई सक्रिय बनाइराख्छ । अमलाको पातदेखि बोट तथा जरासम्म पनि औषधीका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ४/ ५ ओटा अमलालाई रातभरी पानीमा भिजाएर भोलीपल्ट विहान उक्त अमलालाई पानीमा घोलेर, छान्ने र दुई चम्चा महसित मिसाएर खाने गर्नाले शरीरमा भएका विभिन्न खाले विकार हटाउन मद्दत गर्छ ।
हिन्दु धर्ममा तुलसीको प्रयोगलाई पवित्र मानिन्छ । पुजा आजा होस्, वा व्रत हरेक पर्वमा हामी यसको प्रयोगलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसले रगत सफा गर्नुका साथै शरीरमा भएका विकार नष्ट गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । यो एन्टीबायोटिकका रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यो पी जान्नुहोस् :
शरीरको खराब व्याक्टेरियालाई कसरी हटाउने ?
प्रतिरोधी क्षमता शरीरको महत्वपूर्ण भाग मध्यको एक हो । शरीरको प्रतिरोधी क्षमताले शरीरलाई किटाणु तथा विषाणुबाट जोगाएर शरीरलाई तदरुस्त राख्न मद्दत गर्छ । तर, जब यसमा गडबडी आउँछ, तब शरीरमा विभिन्न रोगको संक्रमण हुने गर्छ । यस्ता संक्रमणबाट जोगाउन तथा शरीरलाई फिट राख्नका लागि पनि शरीरको प्रतिरोधी क्षमता मजबुत हुन जरुरी छ । र, शरीरको प्रतिरोधी क्षमता मजबुत बनाउने यी उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
ड्राइ फ्रुट्स हुनसक्छ लाभदायक :
डाई फ्रुट्स मानिसहरु नमोटाओस् भन्नका लागि खादैनन्। जबकी डाई फ्रुट्सले तौल अवश्य नै बढाउँदैन । बरु ड्राई फ्रुट्समा भिटामिन्स, मनरल्स तथा फाइबर भरपूर मात्रामा पाइन्छ, जसले शरीरको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ ।
Don't Miss it यी सामान्य गल्तीहरुले सधै भान्सामा प्रयोग हुने तेल अस्वस्थकर हुन सक्छ
Up Next मृगौला जोगाउन चाहनु हुन्छ भने भुलेर पनि नखानुस् यी खानाकुरा